समर्थकलाई प्रहरीले धरपकड गरेपछि डा. केसी काठमाडौं आउन तयार - Rojgar Manch
समर्थकलाई प्रहरीले धरपकड गरेपछि डा. केसी काठमाडौं आउन तयार
जुम्लामा आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसी काठमाडौं आउन सहमत भएका छन् । प्रहरीले आफ्ना समर्थकमाथि बलप्रयोग गरेपछि डा. केसी आफैं काठमाडौं आउन तयार भएको बताइएको छ । अब केहीबेरमा उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गर्ने प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि सरकारले डाक्टरहरुको टोलीसहित नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर पठाएको थियो । तर, डा. केसीका समर्थकहरुले काठमाडौंबाट गएको टोली र प्रहरीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेका डा। केसीसम्म पुग्नै दिएका थिएनन् । सरकारले डा. केसीको जीवन रक्षाकालागि भन्दै काठमाडौं ल्याउन बिहीबार विहान हेलिकप्टर जुम्ला पठाएको थियो ।
तर डा. केसीले कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टरहरुले आफूलाई राम्रोसँग उपचार दिइरहेको र आफू सन्तुष्ट रहेको भन्दै सुरुमा काठमाडौं आउन अस्वीकार गरेका थिए ।
बिहीबार विहान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरलेले डा। केसकिो जीवन रक्षा र स्वास्थ्य उपचारकालागि काठमाडौं ल्याउनु अत्यावश्यक रहेको भन्दै डा. केसीलाई लिन हेलिकप्टर जुम्ला पठाएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएका थिए।